उपचार निशुल्क गर्न भ्रष्टाचार र फजुल खर्च रोके पुग्छ : डा. बाबुराम भट्टराई - Naya Online
बुधबार, कार्तिक ५, २०७७ (October 21st, 2020 at 10:55am ) राजनीति
काठमाडौं, ५कार्तिक ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना पीडितलाई निशुल्क उपचारको दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा भएको बताउनु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले जनताको ज्यान जोगाउन भ्रष्टाचार र फजुल खर्च रोके पनि पुग्ने बताउनुहुदै अस्पतालहरुमा दानपात्र राखेर भए पनि कोरोना संक्रमित सबैको निशुल्क उपचार गर्नु पर्ने बताउनु भएको हो ।
“कोरोनापीडितलाई निशुल्क उपचारको दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा हो।यसले महामारी झन् विकराल बन्नेछ । यो पैसाको अभावले हैन जनताको ज्यान जोगाउन अरू सबै खर्च रोकेहुन्छ ,भ्रष्टाचार र फजुल खर्च रोके पुग्छ।अस्पतालमा धनीले दिनचाहे दानपात्र राखौंसतर सबैलाई निशुल्क गरौं!”
केहिदिन अघिमात्र सरकारले कोरोनाको परिक्षण र उपचार सम्बन्धि मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै अपाङग, असक्त,ज्येष्ठ नागरिक ,एकल असहाय महिलाहरु र अग्रपंतिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको मात्र सरकारले निशुल्क परिक्षण र उपचार गर्ने निर्णय बताएको थियो ।